Ampiasain’ny governemanta kroaty hamatsiana vavahadin-tserasera mampiely vaovao tsy marina ny volan’ny Fiombonambe eoropeana, kianin’ny sampan-draharaha mpanamarim-baovao izany · Global Voices teny Malagasy
Nararaotin'ny mpandray tombontsoa ny lesoka teo amin'ny lalànan'ny Firaisambe eoropeana
Voadika ny 19 Febroary 2020 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, srpski, Shqip, English
Ireo sainan'ny firaisambe Eoropeana, Kroasia sy NATO mihofahofa manoloana ny ministeran'ny fiarovam-pirenenan'ny Repoblikan'i Kroasia, Zagreb, 17 May 2019. Sary avy amin'ny Global Voices, CC-BY.
Tao amin'ny Faktograf.hr, haino aman-jery iray mpanamarim-baovao any Kroasia sady mpanao sonia voamarin'ny Fehezandalàna momba ny Fitsipika mifehy ny Tambajotra Iraisam-pirenenan'ny mpanamarim-baovao no nivoahan'ity tantara ity voalohany. Indro zaraina etsy ambany ny dikanteny iray voatonta nampiasàna ny lisansa Creative Commons – tsy amidy sy tsy asiana fanovàna.
Tamin'ny 31 oktobra, notaterin'ny sampan-draharaha mpanamarim-baovao Faktograf fa nomen'ny ministeran'ny toekarena, ny fitantanana orinasa ary ny asatànana kroaty vola manodidina ny 13.200 € [ mitovy sanda amin'ny 14.500$ USD] avy tamin'ny fanampiana nomen'ny tahirim-bolan'ny Fiombonambe eoropeana ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr, ” iray amin'ireo sangany mpitarika amin'ny famokarana vaovao tsy marina eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery kroaty”.
Natolotra ny Dnevno.hr ilay vola avy amin'ny tahirim-bola Eoropeana ho an'ny fampandrosoana ny faritra mba hanavaozany ny haba-tranonkalany hanampiana ireo mpamaky azy hahazo “vaovao mahaliana” haingana sy mora kokoa, ary hanampy ny mpanoratra hampitombo ny vola miditra amin'izy ireo.
Kianin'ny Faktograf mafy ny governamanta kroaty tamin'ny nampiasàny ny volan'ny Firaisambe Eoropeana mba hanampiana vavahadin-tserasera iray fantatra amin'ny fanapariahana vaovao tsy marina izay matetika misy resaka fankahalàna. Fanomezana vola nohamarinina tamin'ilay tetikasa antsoina hoe “ taratasim-bola WWW omena ny SMEs” ( orinasa madinika sy salantsalany) izay natomboka tamin'ny volana Aogositra 2018. Efa vita sonia tamin'ny volana Oktobra 2018 niaraka tamin'ny kaompania Motus d.o.o ny fifanaraham-panolorana, kaompania izay mpamoaka ny vaovaon'ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr sy ireo haino aman-jery nomerika marobe hafa. Nankatoavina nandritra ny fepotoana fitondran'ny minisitry ny toekarena amperinasa Darko Horvat, avy amin'ny Fikambanana Demokratika Kroaty (HDZ) antoko eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ilay fanomezana. Voatendry ho minisitra i Harovat tamin'ny May 2018, rehefa tsy maintsy nametra-pialàna noho ilay tantara ratsinà kolikoly fantatra amin'ny hoe raharaha Agrokor ny teo alohany, i Martina Dalić.
Fandrisihana ny olom-pirenena kroaty hanohitra ny Firaisambe Eoropeana — miaraka amin'ny tahirimbolan'ny Firaisambe Eoropeana
Mampihomehy ny fahitan'ny Faktograf ilay volan'ny firaisambe eoropeana ampiasaina hamatsiana vavahadin-tranonkala iray izay matetika mamitaka vahoaka no sady manaparitaka vaovao tsy marina momba ny Firaisambe eoropeana.
Natao ho toeram-pikolokoloana ireo vaovao tsy marina ary avy eo haparitaka amin'ireo sehatry ny haino aman-jery sosialy ny Dnevno.hr talohan'ny fifidianana ny Parlemanta Eoropeana tamin'ny May 2019. Ohatra, aparitaky ry zareo ny filazàna diso hoe ny filoha lefitry ny Kaomisiona Eoropeana (CE) amin'izao fotoana izao, Frans Timmermans – izay mitarika ny mpifaninana avy amin'ny Antoko Sosialista Eoropeana (PES) ho Filohan'ny EC – dia nanohana ny ” fametrahana faobe ny lehilahy silamo” mba ho fitaovana “hanatrarana ny tanjon'ny fanafoanana ny fanjakana maro amin'ny firenena iray.” Nambaran-dry zareo ihany koa fa miezaka ny manala an'i Kroasia amin'ny fiandrianam-pireneny ny ‘chancelière’ alemàna Angela Merkel ary ilay mpanefoefo George Soros no tompon'antoka amin'ny fifindràmonin'ireo olona avy any amin'ny firenena betsaka Silamo mankany Eoropa.
Tsy misy voaporofo ho marina ireo fanambaràna ireo na iray aza, ary ampahany kely fotsiny amin'ireo fandisoambaovao hitan'ny Faktograf ho tsy marina.
Ohatra, tamin'ny oktobra 2018, vaovao tsy marina folo samy hafa naparitaky ny Dnevno.hr no nohamarinin'ny Faktograf, vaovao izay voaporofo fa diso daholo. Amin'ny tranga sasany dia fanambaràna diso izay navoaka voalohany tamin'ny May 2017 no nohavaozina tamin'ny famerenana ny fanapariahana azy niverinberina tamin'ny tambajotra sosialy. Manomboka amin'ny fandàvana ny olan'ny fiovaovan'ny toetrandro izany ka hatramin'ny fanandratana ny filoha rosiana Vladimir Putin sy ny famporisihina ny fankahalàna ireo mpialokaloka sy mpifindra monina avy any Afrika sy Afovoany Atsinanana.
Takelaby lehibe any Zagreba mampiseho ireo fijery politika samihafa ho an'ny fifidianana solombavambahoaka Eoropeana, ny May 2019 tao Zagreba, Kroasia. Sary avy amin'ny Global Voices, , CC-BY.
Tsy mahavaly ny Fitakiana momba Ny Fahalalahan'ny Fanangonana Vaovao ny Ministeran'ny Toekarena, tsy afa-manoatra ny Vaomiera Eoropeana.
Tamin'ny oktobra 18, nametraka fangatahana Fahalalahan'ny Fanangonana Vaovao ( FOI) tamin'ny ministeran'ny toekarena ny Faktograf, nanontany raha toa ka noraisin'ilay mpitsara nanome ilay volan'ny Firaisambe Eoropeana ho an'ny Dnevno.hr an-tànana ny kalitao sy ny fahamarinan'ny votoatin'izy ireny. Tsy nahavaly ilay fanontaniana ilay andrim-panjakana sady tsy araka ny lalàna fa tsy nomeny ilay mpamoaka vaovaon'ny Dnevno.hr ny dika mitovin'ilay fifanarahana vita sonia.
Ny hany vaovao nomen'ny ministera ho valin'ny fitakian'ny FOI tamin'ny 23 oktobra dia ny tahirin-taratasy misy ny famaritana ankapobeny momba ny fepetra fizaràna ireo famatsiambola tao anatin'ilay antsoina hoe ” taratasim-bola WWW ho an'ny SMEs”. Naverin'ny Faktograf ny fangatahany ny androtr'io ihany, mitaky ny vaovao marina, nefa tsy nahazo valiny mandraka androany.
Nanoratra tany amin'ny Vaomiera Eoropeana ihany koa ny Faktograf, nilaza tamin'ny mpitondrateny miandraikitra ny fanomezana fanampiana ao amin'ny Tahirimbola Eoropeana ho an'ny Fampandrosoana Isamparitra. Nanontanian'ilay hetsika mpanamarim-baovao raha toa ka ara-dalàna ny fandaniana ny volan'ny Eoropeana amin'ny famoahana vaovao tsy marina, ary raha toa ka afaka mampiasa ilay vola mba hamatsiana ireo olona izay manapariaka vaovao tsy marina sy mandrisika ny fankahalàna ireo fanjakana mpikambana ao.
Namaly ny Vaomiera Eoropeana fa tsy afaka maneho hevitra amin'ity tranga manokana ity. Ny “ady amin'ny vaovao tsy marina no fanamby iombonana sy maharitra izay tsy maintsy atrehan'ny andrim-panjakanan'ny Firaisambe Eoropeana sy ireo fanjakana mpikambana rehetra”, no valinteny ôfisialy nasongadin-dry zareo
Araka ny vaovao tsy ôfisialy voarain'ny Faktograf avy aminà loharanom-baovao tsy mitonona anarana avy ao anatin'ireo andrim-panjakan'ny Firaisambe Eoropeana dia tsy afaka manao na inona na inona amin'ity tranga ity ny Firaisambe Eoropeana satria ny fitsipika voalohany momba ny fizaràna ireo famatsiambola avy amin'ny tahirimbolan'ny Firaisambe Eoropeana dia tsy namaritra mialoha ny toejavatra tahaka izany. Tsy nisy nieritreritra tany aloha fa tokony hasiana fandraràna mazava tsara tsy hanaparitahana vaovao tsy marina ny fandaniana ny volan'ny Firaisambe eoropeana. Araka ny lojika, azo atao avokoa izay rehetra tsy voarara mazava, dia lasa hoe tsy nahodin'ny governemanta kroaty ny vola tamin'ny nanomezany izany ho an'ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr, hampidi-bola no tanjona.
Ny hanozongozonana ny Vondrona Eoropeana no tanjona amin'ny fampiasàna ny volan'ny vondrona Eoropeana mba hamafazana lainga sy fotokevitra tsy mazava, toy ny hoe, indraindray, ilain'ny Dnevno.hr sy ny mpamoaka ny vaovaony ny “manaikitra ny tànan'izay mamelona azy”.
Hampiroboroboina ny fitiavan-tanindrazana sy ny fankahalàna ireo any ankoatry ny sisintanin'i Balkana
Ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr dia isan'ny tambajotranà haino aman-jery noforonin'ilay mpandraharaha miteraka resabe, Michael Ljubas, fantatra tamin'ny fividianana ny Elektroproment sy naha-bankirompitra azy, orinasa iray avy tao Zagreba nanana mpiasa maherin'ny 300 tamin'ny fotoana nampalaza azy ary nampiasa vola efa ho 15 tapitrisa dolara amerikana. Ny taona 2010 no nanorenan'i Ljubas ny vavahadin-tserasera niandohan'ny kaompania Dnevno d.o.o, efa ela talohan'ny nampalaza ilay voambolana “vaovao diso / fako”. Tsy nisy akony tamin'ireo fandraharahàny ny fitomboan'ny fampitandremana momba ny fiantraikan'ny fandisoana vaovao amin'ny maha-loza mitatao goavana azy ho an'ny demokrasia.
” Isanandro” no dikan'ny “Dnevno” amin'ny teny kroaty, serba ary bosniaka, ary ny orinasanà haino aman-jerin'i Ljubas any Serbia sy Bosnia ary Hezegovina ihany koa dia nahitàna vavahadin-tserasera mitovy anarana amin'izany.
Mitahiry angon-drakitra mirakitra ireo loharanom-baovao tsy marina mihatra amin'ny firenena ny sampana mpanamarim-baovao bosniaka Raskrinkavanje.ba, 1.500 mahery ny isan'ireo voaangona hatramin'ny Novambra 2017. Raha araka io angon-drakitra io, dia samy mampiely vaovao tsy marina momba an'i Bosnia sy Herzegovina ny dikantenin'i Dnevno : kroaty (Dnevno.hr), bosniaka ( Dnevno.ba) ary serba ( Dnevno.rs), isan'izany ireo fanodinkodinana ara-politika, votoaty mampihetsi-po mba hanairana ny sain'ny mpamaky ho amin'ny fotokevitra tsy mazava sy hampiroboroboana ny sarintsarinà siansa. Ny dikanteny kroaty no nanaparitaka ny ankamaroan'ny vaovao tsy marina tamin'ny alàlan'ny fizaràna lahatsoratra 23 tamin'ireo vavahadin-tserasera samy hafa, narahan'ny dikanteny bosniaka (14) ary ny dikanteny serba (3).
Malaza ratsy amin'ny fandrehetana ny fitiavan-tanindrazana sy fanaparitahana vaovao tsy marina ireo vavahadin-tserasera telo ireo, hoy ny Faktograf. Ny dikanteny kroaty mandrisika ny fankahalana ny serba, ary tahaka izany ny dikanteny serba mandrisika ny fankahalana ny kroaty, mihalalina ny fisarahana misy eo amin'ny vahoaka roa tonta izay fanjakana tafiditra tamin'ny ady feno rà nandriaka ka nahavaky an'i Yôgôslavia tamin'ny 1992. Tamin'ny 2013, nampitandrina ny amin'izay mety ho fahavoazana ateraky ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr amin'ny fiarahamonina kroaty izay efa mifanao ankolafy rahateo ny fikambanan'ny mpanao gazety kroaty. Hoy ny HDN :
Ireo fanakianana sy fanalambaràka ataon'ity vavahadin-tserasera ity amin'ny lafiny kely indrindra dia ny famoahana ny gazety mivoaka isan-kerinandro ‘7Dnevno’ miampanga ny olona tsirairay, ireo fikambanana ary vondrona izay tsy manaraka ny fomba fijeriny amin'ny fandalàna ny hery ankavanana mmifikitra amin'ny nentindrazana izay nitondra ny fiarahamonintsika tamin'ny taona 1990 ary matetika mampietry ny kolontsaina momba ny serasera ifanaovana amin'ny vahoaka ho amin'ny toeran'ny lahatenim-pankahalàna ataon'ireo gazety mpisary gaigy Slobodni tjednik sy ny Imperial nandritra sy taorian'ny ady.
Nametraka ny tombambokatra (filazàna fatiantoka) ilay orinasa reniny, ny vavahadin-tserasera Dnevno d.o.o ary nikatona tamin'ny 2019. Ny antony iray nahatonga ny Dnevno.hr ho bankirompitra dia ny tsy fanànana vola handoavana ireo onitra ho an'ireo olona izay nanenjika azy noho ny fanalàmbaraka taorian'ny namoahany fiampangana lainga sy fanendrikendrehana. Na izany aza, tsy afaka nahazo onitra ireo mpitory satria ny marika Dnevno.hr efa lafon'i Ljubas tamin'i Marija Dekanić, ilay tompon'ny masoivoho ‘marketing’ ara-kajimirindra Logbox. Mpikambana tao amin'ny Antokon'ny Vahoaka Kroaty ( HNS) izy taloha, tanora mpiara-miasa amin'ny Sendika Demokratika Kroaty (HDZ) ao amin'ny fiaraha-mitantana amin'izao fotoana izao. Dekanić no tompon'ny kaompania Motus d.o.o, ilay mpamoaka lahatsoratry ny vavahadin-tserasera Dnevno.hr amin'izao fotoana izao, izay mandray ny fanampiana avy amin'ny tahirimbola Eoropeana ho an'ny fampandrosoana isamparitra ho fanomezana endrika vaovao ilay vavahadin-tserasera.